Ny Fanahy Masina : Vavolombelona
"Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika." Rom. 8 : 16.
Inona ny zavatra miseho raha toa ka mijoro ho vavolombelona miaraka amin'ny fanahintsika ny Fanahy Masina, ary milaza fa zanak'Andriamanitra isika? Hilefitra tanteraka eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ilay fanahy mino. Lasa miova ho fahamasinana sy fifandraisana efa mahazatra, ho an'ny olona izay mitady an'Andriamanitra amin'ny fony manontolo ny fiandrianan'ny lanitra, ary amin'ny alalan'ny habetsahan'ny fanehoana ny fahasoavany dia hiova ho malefaka tahaka ny zazakely mbola mila fianteherana ny zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy apetrakao eo amin'Andriamanitra amim-pahatokiana tanteraka ny heriny sy ny finiavany hitahy anao, ny fanahinao sy ny vatanao, amin'ny maha-olona tsy mahavita na inona na inona sy tsy mendrika anao. "Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany" - Jao. 1 : 12.
Aoka tsy ho be fihetsiketsehana be fahatany, fa aoka harisika sv hazoto ao amin'ny finoana, amin'ny tanjona iray, tsy inona izany fa ny hitarika fanahy ho eo amin'i Jesôsy Kristy, Ilay Mpanavotra nohomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy ny toriteny manaraka ny lôjika, na ny toriteny handresy lahatra ireo manam-pahaizana no hanao izany asa izany. Tsy maintsy resy lahatra ny fo, ary miempo hiova ho amin'ny fahalemem-panahy. Tsy maintsy ampileferina eo ambany sitrapon'Andriamanitra ny sitra-po ary ny faniriana rehetra sarihina hiompana amin'ny any an-danitra. Tsy maintsy mamoky ny tenanao amin'ny tenin'ilay Andriamanitra velona ianao. Tsy maintsy entinao hampiharina eo amin'ny fiainanao izany. Tsy maintsy manapaka sy mifehy ilay olona manontolo izany (...)
Rehefa i Jesôsy no ataontsika toky. maharitra sy tsy tapaka ho antsika, amin'izay fotoana izay dia ny tenantsika no hataontsika fanatitra ho an'Andriamanitra. Eo amin'ny fahamarinan'i Jesôsy Kristy sy ny fanelanelanana ataony, amin'ny maha-hany fanantenana ho antsika Azy, no hisy ny fianteherantsika. Tsy hisy ny fisavorovoroana, tsy hisy ny tsy fahatokiana, satria amin'ny alalan'ny finoana dia hitantsika i Jesôsy, ilay nohosoran'Andriamanitra ho amin'izany tanjona izany, mba hampihavana noho ny fahotan'izao tontolo izao. Hijoro lzy, handray andraikitra amin'ny alalan'ilay fifanekena manetriketrika mba ho mpanelanelana eo amin'ny toeran'ireo olona rehetra izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany, ary hanatanteraka ny famonjena azy ireo raha toa ka mino izy ireo. Omena fotoana mety fanararaotra hahazoantsika manatona amim-pahasahiana ny seza fiandrianan'ny fahasoavana isika, mba hahazoantsika famindrampo, sy hahitantsika fahasoavana, izay hanampy antsika amin'ny fotoana rehetra ilantsika fanampiana - MR, b. 14, tt.276,277.